आज दर खाने दिन : के खाने, के नखाने ? यसरी बनाउनुस् मिठो र स्वस्थकर दर (टिप्ससहित) - Lokpath Lokpath
१५ भाद्र २०७६, आईतवार १२:५१
आज दर खाने दिन : के खाने, के नखाने ? यसरी बनाउनुस् मिठो र स्वस्थकर दर (टिप्ससहित)
प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०७६, आईतवार १२:५१
काठमाडौं । हिन्दू नारीहरुको महत्वपूर्ण चाड हरितालिका तिजको पहिलो दिन आज दर खाएर मनाइदैं छ । भोलि व्रत भएकोले दिउँसो भरी नाचगान गर्दै नारीहरुले पीडा पोख्दा चर्को घाममा उनीहरुलाई समस्या नहोस् भनेर दर खाने प्रचलन रहेको छ । हरितालिका तीजको अघिल्लो दिन दर खाएर भोलिपल्ट व्रत बसी पूजाआजा, नाचगान तथा दिदीबहिनी भेटघाट गर्ने चलन छ । हुनत अहिले चलन फेरियो । केहि हप्ता अघिदेखिनै काठमाडौ लगायतका सहरमा यो रमझम छ । दर खाने र खुवाउने कार्यक्रम भइरहेका छन् । सहरबजारमा हुने यस्ता दर कार्यक्रममा भेज तथा ननभेज दुवैथरी भोजन समावेश हुन्छन्।
दरका नाममा मादक पदार्थको प्रयोग पनि भएका समाचारहरु बाहिरिएका छन् । यी कुराहरुलाई यहिँ छोडौँ । दर धेरै खाँदा पनि स्वास्थ्यमा समस्या हुन्छ । कस्तो किसिमको दर खाने भन्ने कुराले स्वास्थ्यमा प्रभाव पारेको हुन्छ । शरीरले धान्नै नसक्ने गरी धेरै खाँदा झाडापखाला, पेट ढुस्स हुने, फूल्ने, ढ्याउ आउने, ग्याँस भरिने जस्ता समस्याहरु देखा पर्दछ । त्यसैले ठिक्क आफ्नो शरीरको पाचन क्षमता हेरेर खानुहोला ।
दरमा के खाने ले नखाने ?
-वर्खायाम भएको कारणले पनि बजारका खानेकुरा तथा सागसब्जीमा फोहोर हुनसक्छ । राम्रोसँग पखालिएको र पकाइएको खानेकुरा मात्रै खाने ।
-सकेसम्म बजारबाट भन्दा घरमै बनाइएको ताजा र पोषिलो खाना खानुपर्छ ।
-दरमा माछा मासुजस्ता परिकार खाने चलन पनि छ । तर मरमसला हालेर पकाइएको यस्ता चिज नखानू जाति हुन्छ ।
-तेलमा तारेको खानेकुरा नखान सुझाव छ ।
-नुन धेरै सेवन गर्दा पानी तिर्खा लाग्ने भएकोले निर्जल व्रत बस्नेलाई समस्या हुन्छ ।
-व्रतको बेला नाचगानका धेरै शक्ति खेर फाल्नु पनि अनुपयुक्त हुन्छ ।
-दरको नाममा मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन ।
-पोषणका लागि दरमा दुग्ध खाद्य पदार्थ खानु राम्रो मानिन्छ ।
-फलफूल तथा अन्नबाट बनेका परिकार समावेश गर्दा राम्रो हुन्छ ।
-बिरामीले सकेसम्म व्रत नगर्दा राम्रो गरिहालेको खण्डमा निराहार व्रत गर्नु स्वास्थ्यका दृष्किोणले राम्रो हुन्न ।
तीजमा पकाइने दर एक विशेष प्रकारको दूधजन्य खाना हो । आफ्नो इच्छा र चाहना अनुसार अन्य समयमा खाए पनि हरितालिका तीजको पहिलो दिन भने ‘दरखाने दिन’ कै नामले प्रख्यात छ ।
यसरी बनाउनुस् मिठो दर
(७) काक्रोको अचार
(८) अब दूध आवश्यकताअनुसार राख्ने र राम्रोसँग चलाई रहने ।
यो छुटाउनुभयो की ?
तपाईको फेसबुक कहाँ खुलेको छ ?
काठमाडौं । हामीले साधारण तया साइवरमा गएर वा अन्य कतै जाँदा फेसबुक बिभिन्न